बीलाईन साइकलको नेविगेशन उपकरण समीक्षा: अन्वेषकहरू लागि तनाव-मुक्त मजा - समाचार नियम
बीलाईन साइकलको नेविगेशन उपकरण समीक्षा: अन्वेषकहरू लागि तनाव-मुक्त मजा
यो त्यहाँ अन्वेषण र जागरूकता सबैभन्दा कुशल मार्ग भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ गैर-जीपीएस संचालित मार्ग लागि एक अंतर स्पष्ट छ.
शीर्षक यो लेख “बीलाईन साइकलको नेविगेशन उपकरण समीक्षा: अन्वेषकहरू लागि तनाव-मुक्त मजा” एलेस्टर Jardine द्वारा लेखिएको थियो, लागि theguardian.com बुधवार 25 नोभेम्बर मा 2015 09.52 UTC
यो समीक्षा गर्ने बीलाईन को एक प्रारम्भिक चरण प्रोटोटाइप संग आयोजित गरियो, एक arduino बोर्ड द्वारा संचालित. अन्तिम हार्डवेयर र अनुप्रयोग मा जहाज कारण अगस्ट 2016 विभिन्न दिखेगा.
यो बीलाईन सधैं सही दिशा मा तपाईं पोइन्ट एउटा तीर लागि आफ्नो सामान्य पालो-पालो दिशा डम्प्स एक चक्र नेविगेशन उपकरण छ.
एक Kickstarter अभियान रूपमा शुरू, तपाईं एक कार मा हुनेछ रूपमा बीलाईन एक पालो-पालो जीपीएस उपकरण छ, बरु यो केवल आफ्नो अन्तिम गन्तव्य निर्देशन देखाउँछ. यो तपाईं आफ्नो nouse प्रयोग त्यहाँ प्राप्त गर्न थप स्वतन्त्रता दिन्छ. यसको निर्माताहरू यो "अस्पष्ट नेभिगेसन" कल.
यो बीलाईन प्रोटोटाइप, एक Arduino द्वारा संचालित र Android फोन जडान. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
अवधारणा सरल छ. यो बीलाईन भारी उठाने को सबै भन्दा गर्न आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग: तपाईँले अनुप्रयोग आफ्नो अन्तिम गन्तव्य प्लग, र दिशा र दूरी त्यसपछि आफ्नो हैंडल गर्न strapped को बीलाईन उपकरणमा देखाइएको छ.
अन्तिम अनुप्रयोग पनि मार्ग विन्दुहरू समर्थन हुनेछ, आफ्नो मनपर्ने कफी शप मार्फत थप लचिलो मार्ग अनुमति. म एक स्पिन लिए अनुप्रयोग मात्र एकल गन्तव्य निर्देशन मलाई कुरा गर्न सक्छ.
मजा र पालै पालो भन्दा कम तनावपूर्ण
आफ्नो गन्तव्य दिशा मा तीर अंक. स्क्रिनमा बटन प्रदर्शन र विकल्पहरू बीच स्विच हुनेछ, जबकि सेतो रिबन को प्रोटोटाइप को बस भाग हो. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
उपकरण एउटा सानो कालो Puck छ, फोन प्रयोग ब्लुटुथ संग सञ्चार. यो हैंडल वरिपरि पट्टियाँ, र एउटा सानो गोलाकार ई-पेपर आफ्नो गन्तव्य गर्न निर्देशन र दूरी देखाउन प्रदर्शन छ.
यसलाई प्रयोग गरेर परम्परागत पालो-पालो जीपीएस उपकरण भन्दा धेरै रमाइलो छ; तिनीहरूले बाइक मा केहि तनावपूर्ण हुन सक्छ, विशेष चक्र-unsympathetic सडक मार्फत र गर्न सक्छन् मार्ग. तिनीहरूले दक्षता तरखरमा, अन्वेषण छैन.
केवल आफ्नो अन्तिम गन्तव्य मा ईशारा गरेर, को बीलाईन स्वतन्त्रता को एक अर्थमा प्रदान. यो तपाईं लामो समय को लागि गलत दिशामा शीर्षक छैन भनेर हुन पर्याप्त सक्रिय महसुस. तपाईं कहिलेकाहीं जीपीएस बाइक कम्प्युटर प्रयोग नेभिगेट हुँदा महसुस खूंखार को अर्थमा थिएन. केवल निर्देशन देखाउने एक पक्ष लाभ यसलाई आफ्नो वरपर संग पुन: संलग्न तपाईं जानुहुन्न छ, र तपाईं ठाँउ को एक बलियो अर्थमा दिन्छ.
एक बारी-पालो साइकलको कम्प्युटरको धेरै turnings छुटेका भएको, म यसलाई एक दुखाइ रहेको पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरू अक्सर तपाईं पाठ्यक्रम बन्द हुनुहुन्छ पहिचान गर्न र त तपाईं मार्ग दुबारा गर्न अनुरोध एक समय लाग्न. के तपाईं त्यसो गर्न निर्णय गरेपछि, तपाईं अक्सर सबै भन्दा राम्रो दिशा बदल्ने रोक एक चक्र गर्न प्रमुख छुटेका गर्नुभएको, यसलाई भेट्टाउने लागि प्रतीक्षा, त्यसपछि फेरि जाँदै रही. यो अप्ठ्यारो छ.
सानो कालो Puck
यसको ढक्कन को माध्यम ले हैंडल मा बीलाईन क्लिप. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
हार्डवेयर को एक राम्रो पक्ष यसको आकार छ (एक पटक यो जहाज - क्षणमा यो एक मुछिएको एक MacGyver-जस्तो सृष्टि हो Arduino र एक USB ब्याट्री). खल्तीमा मा राखिएको यो पर्याप्त सानो छ, झोला वा saddlebag. किनभने तपाईंको फोनको स्क्रिनमा राखन यसको ब्याट्री हत्या यो तपाईं शायद नेभिगेसन लागि आफ्नो स्मार्टफोन भन्दा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ चाहन्छु एक यन्त्र हुन चाहन्छु.
यसलाई संलग्न र detaching सजिलो छ कुनै कोष्ठ त्यागेका छ रूपमा. यो प्रोटोटाइप यसको ढक्कन गर्न बीलाईन जडान एक कडा रबर ब्याण्ड मार्फत मा भएको थियो. दुई यो हैंडल मा पकड प्रत्येक अन्य मा काटियो. यो ठीक लाग्यो, यसलाई अलिकति छाडा थियो शोधन संग तर गर्न सक्ने. ढक्कन एक झोला वा खल्तीमा मा परिवहन लागि स्क्रिनमा मा फ्लिप गर्न सकिन्छ.
यो बीलाईन हाल £ 45 को लागि Kickstarter मा उपलब्ध छ, र अगस्ट मा जहाज अपेक्षा छ 2016. अन्तिम खुद्रा संस्करण £ 60 वरिपरि खर्च गर्न अपेक्षित छ.
यो त्यहाँ अन्वेषण र जागरूकता सबैभन्दा कुशल मार्ग भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ गैर-जीपीएस संचालित मार्ग लागि एक अंतर स्पष्ट छ. पनि यसको प्रोटोटाइप अवस्थामा, को बीलाईन प्रयोग गर्न मजा थियो, र म एक परम्परागत पालो-पालो सिस्टम भन्दा यो कम तनावपूर्ण प्रयोग गर्न पाइने.
तिनीहरूले जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ अवधारणा कि शहर मा सवारी र लगभग थाहा गर्नेहरूका लागि ध्वनि छ, वा एन मार्ग थप लचकता चाहनुहुन्छ. हामी हार्डवेयर एक पटक उपकरण अगस्ट मा पठाइएको छ जस्तो देखिन्छ के देख्नु.
पेशेवरों: सानो, प्रकाश, संलग्न गर्न सजिलो, थप सवारी स्वतन्त्रता, कुनै पुन मार्ग ढिलाइ, किनभने ई-पेपर स्क्रिनको राम्रो ब्याट्री जीवन (सिद्धान्त मा)
नकारात्मक: आँखा बंद निम्न निर्देशनहरू भन्दा आफ्नो टाउको प्रयोग आवश्यक, सबैभन्दा कुशल मार्ग लिन सक्छ, crowdfunding मा केहि ब्याक एक जोखिम छ
एलेस्टर Jardine, लेख, Crowdfunding, साइकल, ग्याजेटहरू, जीपीएस, Kickstarter, जीवन र शैली, समीक्षा, प्रविधि
← स्याउ टिभी समीक्षा: चौथो-पुस्ता प्रवाहका बक्स पूर्णतया सुखा छैन 30 प्रविधी-व्यावहारिक ज्ञानयुक्त छोराछोरीलाई लागि क्रिसमस उपहार विचार →